အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် Penile sensitivity (၁၉၉၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ Porn
Comments: ပေါင်းချုပ် PE နှင့် DE လျော့နည်း sensitivity ကိုခဲ့ရသည်။
J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1993 Fall;19(3):189-97.
Rowland DL, Haensel သည် SM, Blom JH, Slob AK.
46383 IN စိတ်ပညာဌာန, Valparaiso တက္ကသိုလ်။
ယခင်သုတေသန penile sensitivity ကိုအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုထက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ sensitivity ကိုတိုတောင်းသောသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်) နဲ့ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းယူဆချက်တွင်, ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဆွ vibrotactile မှ penile တံခါးခုံကို (sensitivity ကို) စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အချိန်မတန်မီသုက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဒါမှမဟုတ်က c နှင့်အတူယောက်ျားစဉ်ထိန်းချုပ်မှုညီတံခါးခုံပြသ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် ombined သိသိသာသာမြင့်မားသောတံခါးပြသခဲ့သည်။
အချိန်မတန်မီသုက် penile hypersensitivity မပြပေမဲ့, သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်နှင့်ခုံများအကြားကဒီအုပ်စုထဲမှာသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိ၏။ ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်များသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်အတွင်း penile sensitivity ကိုများအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်နှင့်အခြား somatic အချက်များသို့မဟုတ်သိမြင်အချက်များအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတွက်ပိုပြီးအရေးပါအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။